Isisekelo Sokumaketha Okuhle Nokubi | Martech Zone
NgoLwesibili, Novemba 11, 2014 NgoLwesibili, Novemba 11, 2014 Douglas Karr
Kubukeka sengathi ukuhlakanipha kungenye yalezo zinto ezingafundiwe, kuza nobuhlungu, injabulo nokunye okuhlangenwe nakho. Njengoba ngikhula ngokwengeziwe ebhizinisini lami, ngithola ukuthi isikhathi esiningi engisichitha ngibeka okulindelwe, imiphumela iba ngcono noma ibe mibi kakhulu kumakhasimende ethu. Uma ngithi ngizofeza okuthile futhi kuthatha isikhathi eside kunalokho ebengikucabanga - ukulindela okungabanjwanga kubangela ukukhungatheka. Uma ngithi ngizofeza okuthile futhi nginikeze iphrojekthi ukwengeza komunye umsebenzi wenani - ngeqe okulindelwe futhi iklayenti lijabule.
Ngisahluleka izikhathi eziningi, kepha isisekelo sempumelelo yami kwezamabhizinisi sihambisana kakhulu nokulindelekile engikubekile. Angikholwa ukuthi yi-epiphony - kepha ngikholwa ukuthi yisisekelo sokumaketha okuhle nokubi nganoma yiliphi ibhizinisi online. Ukubeka okulindelwe kuncane kakhulu. Sebenzisa amacala, amacala, izibalo, ukukhishwa kwabezindaba, okuthunyelwe, izibuyekezo… konke esikwenzayo kuvame ukumayelana ne- isimo esihle kakhulu, hhayi ngezimo ezingokoqobo.
Kuleli sonto ngiye eFlorida ukuyokwamukela umshana wami ebuyile ekuthunyelweni kwakhe okokuqala eGulf. Ngishayele phansi nenja yami, ngakho-ke simise okuningi. Kwenye indawo yokuphumula eFlorida, ngithole lolu phawu oluhlekisayo ngaphezu kokuchama.
Inkinga ngophawu, yiqiniso, ukuthi ngenkathi imaketha ukuzisebenzisela kokuchama, kuya endaweni ehlakaniphile njengami, inikeza umyalezo wokumaketha ohluke ngokuphelele, ongafinyeleleki. Umsebenzi, yiqiniso, awunazandla… lokho kungaba okumangazayo kepha okungenzeka ukuthi akukho emthethweni.
Kufanele siqaphele okulindelwe ukumaketha esikubekayo. Ngenkathi inhloso yethu kungaba ukuxoxa ngenqubekela phambili nokutshalwa kwemali esikwenzayo, akusho ukuthi kudlulisele umyalezo ofanayo kuzethameli zethu.
Ukusetha okulindelwe okunembile, okungafinyeleleka emizamweni yakho yokumaketha kuzokusiza ukuthi ubone futhi uvale amakhasimende afanele, okuholele ekwandeni kokugcinwa kanye nenani elikhulu lamakhasimende. Ukubeka okulindelwe okungekuhle ngeke kuholele kuphela emazingeni aphezulu okukhanga, futhi kungashayela nokubuyekezwa okungalungile nengxoxo yokuxhumana nabantu online. Lokhu-ke, kungaxosha ibhizinisi elingase libe ngamakhasimende amahle.
Isisekelo sakho konke ukumaketha kungukuthi ukubeka okulindelwe okuhle. Ukumaketha okuhle kuholela ebudlelwaneni obuhle bamakhasimende, okuholela ekwakheni idumela elihle online ... okuholela kumakhasimende amahle kakhulu.
Yakha ama-CTA bese usabalalisa njengezikhangiso ze-Banner nge-Bannersnack
Nov 13, 2014 ngo-3: 38 AM
Sawubona Mnu Karr
Wonke amaphuzu owabhalile alungile njengemvula.
Ukusetha okulindelwe okungokoqobo esikhundleni semali ebekiwe kungcono kakhulu kutholakale imiphumela. Ukumaketha Okuhle Nokubi konke kungumdlalo wokubeka okulindelwe.
Futhi kufanele ngithi isibonelo osinikezile ukucabanga nje kwengqondo ... .LOL
Nov 21, 2014 ngo-9: 24 AM
Okuthunyelwe okuhle - ngikhulile ngalesi sihloko kubhulogi lami lakamuva. Ngingahlonishwa ngempela uma ungayihlola bese unginika impendulo? https://www.linkedin.com/pulse/article/20141121125524-103311141-are-marketers-living-up-to-customer-expectations-this-christmas
Kunoma ikuphi, qhubeka nomsebenzi omuhle!